Nampivondrona ny Heriny ny Demotix sy ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2017 16:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Português, Español, عربي, English
(Fanamarihana: tamin'ny 15 Desambra 2010 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny Global Voices sy ny Demotix, ilay seha-baovao an-tsary izay efa nahazo loka maro. Nampiasainay ny sarin'izy ireo , ary namoaka ny lahatsoratray ny Demotix ho setriny.
Tahaka ny Global Voices, niorina ny Demotix rehefa nihaona ny hetsiky ny olom-pirenena sy ny asa fanaovan-gazety, niaraka tamin'ny fitsipika fototra roa dia ny fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana mamoaka vaovao. Matetika mitovy ny lahatsoratray izay be mpijery indrindra .
Nanomboka nitady mpaka sary mahaleotena ny Demotix tamin'ny taona 2009 ary nahatahiry sary mahatalanjona maherin'ny 400.000 ireo vondrom-piarahamonina niaraka tamin'ny mpaka sary miisa 3.500 avy amin'ny firenena maherin'ny 190 nanomboka tamin'izay. Ny maodely ara-toekarena narahiny: ny mivarotra sary ho an'ny gazety, ny fantsom-pahitalavitra ary ny tranokalam-baovao toy ny anay sy ny mizara ny sarany (mora na lafo) hatramin'ny 50% ho an'ny mpaka sary. [Raha nanana fakantsary ianao dia afaka nanatevin-daharana ny vondrom-piarahamonina tamin'izany fotoana.]
Ho an'ny Global Voices, kely ny vola fandraisana anjara kanefa nanome lanja ireo tahirin-tsary izay tsy dia nampiasain'ny fampitam-baovao ara-barotra firy loatra izahay. Niezaka hatrany izahay tamin'ny fisarihana ny sain'ireo olona sy ireo toerana tsy mahazo fitateram-baovaoo firy avy amin'ny fampahalalam-baovao hafa. Tena nilaina ny sary amin'ny fanampiana ny mpamaky hahatakatra ny fiainana sy ny fomba fisainana any an-kafa.
Nanantena ny handrisika hatrany ny fifandraisana bebe kokoa eo amin'ireo mpamaky sy mpandray anjara izahay ao amin'ny tranonkala tsirairay, amin'ny alàlan'ny fampidirana ny flux RSS Global Voices ao amin'ny pejy natokana ho an'ny firenena na ny kaontinanta misy ny Demotix .
Na dia mifaninana amin'ny maodelin'ny fampitam-baovao nentim-paharazana aza ny aterineto, dia mbola vitsy ny fikambanana no manavao toy ny ataonay amin'ny fitateram-baovao iraisam-pirenena. Faly izahay miara-miasa amin'ny Demotix .
Ity ny rohy mankany amin'ny fanambarana an-gazety nataon'ny Demotix.